Guy Rivo Randrianarisoa Notendrena ho Sekretera jeneralin’ny CUA
Taorian’ny tsy naha minisitra azy sy ny fampahafantarany fa tsy ho kandida Solombavambahoaka Atoa Guy Rivo Randrianarisoa dia napetraka eo amin’ny andraikitra maha Sekretera jeneraly eo anivon’ny kaominina Antananarivo (CUA) ity depiote sady minisitra teo aloha ity.
Ao anatin’ny ainga vao ho fanatsarana sy fanavaozana ny fitantanana ny tanàna izany, ka dia nampahafantatra ny mpiara-miasa aminy akaiky omaly tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely, ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana. Nambarany fa ny fanarenana sy ny fanavaozana ny fitantanana ny tanàna atao no mahatonga ny fanendrena vaovao ary hisy ihany koa ny famindran-toerana. Mitohy hatrany, hoy, izy ny fanatsarana ny tanàna dia ho kaominina modely Antananarivo, izany dia mitaky ny antsoina hoe: “Rodobe ho amin’ny fanatsarana ny renivohitra”. Tanjona ny hananana tanàna madio, raharaha na “service public” hatokisan’ny vahoaka, haingana sy tsara kalitao, fifamoivoizana mirindra ary fampidiran-ketra mitombo hatrany. Hampihatra ny “e-gouvernance” noho izany ny kaominina na fitantanana mampiasa ny teknolojia vaovaon’ny fifandraisana sy serasera: hanamorana ny fanaovana taratasy isan-karazany sy ny fifandraisana amin’ny vahoaka mpanjifa, hampitomboina ny fampidiran-ketra, hanatsarana ny fiaraha-miasa amin’ny orinasa samy hafa miara-miasa amin’ny fiadidiana ny tanàna. Ny fampiasana ny e-gouvernance dia antoky ny fitantanana mangarahara sy fampihenana ny kolikoly. Hatao ho filamatra na “pilote” ny Boriborintany voalohany sy faha-6. Nankasitraka ireo mpiara-miasa ny Sekretera jeneralin’ny kaominina teo aloha, Heriniaina Razafimahefa ary nambarany fa mbola ho ao amin’ny CUA hatrany izy. Ny vaovao, Guy Rivo Randrianarisoa kosa dia nanambara fa vonona hiara-kiasa amin’ny rehetra.